China Deluxe Spring Coiled Lanyard Cord ho an'ny fametahana rano manamboatra rano maimaimpoana sy famokarana rano. Spocket
Deluxe Spring Coiled Lanyard Cord ho an'ny fametahana rano maimaim-poana amin'ny rano
Fanamarinana: ISO, CE, ROHS
Laharana maodely: CTL-101
Indraindray, nantsoinay hoe lanyard mihinjitra, ny lanyuard fitaovana bungee no fomba malaza indrindra amin'ny faritra azo antoka, ary koa noho ny fahaizany maro. OEM misy loko arak'izay tadiavin'ny mpanjifa, miaraka amina safidy mpampifandray durablitly avo sy avo, fomba tsotra sy ekonmomika hanombohana amin'ny fametahana fitaovana. Ankoatr'izay, azo alaina miaraka amin'ny buckles adidy mavesatra haingana izay vita amin'ny vy tsy misy stiain na alimina fiaramanidina ohatra, avy eo mamorona lanyard elastika tokana miasa amin'ny fitaovana maro amin'ny fampiharana maro.
Mpamatsy sinoa mivantana avy any Sina, manana traikefa matihanina amin'ity sehatra ity. Tongasoa eto amin'ny OEM na ODM, misy koa ny lanyard mihorongorona SpocketGuard amin'ny fonosana marika manokana, miresaka aminay izao!
Super Duty Wire Coil Tool Lanyard
TPU sy fitaovana vy tsy misy vy
Mitazona ny fahatsiarovana ny coil
Tariby 2.0mm, tady 5.0mm, coil 23 / 28mm, halavan'ny 125 / 120mm
Ny loko malaza dia misy loko mangarahara, mena, maitso, manga, mavokely
Stainless vy 2 snap hook (6x60mm)
Vaky vaky - 100kg
Matetika misy amin'ny loko mainty, manga, maitso, mena
Mini baiko namboarina 500pcs isaky ny loko
Miasa amin'ny havoana, fiakarana, famonoana afo, fiakarana an-tendrombohitra, asan-tsolika, famonoana, familiana, herinaratra
Voaro tsara ny fitaovanao, sy ny vahaolana mety ary ny safidy tonga lafatra amin'ny palitao na fehin-tànanao.
Ity rafitra coil profile ity dia mampihena ny fahafahan'ny fidirana an-tsehatra, mamela ny fitaovam-piadiana feno sy mampiasa tsy misy hery mihemotra ratsy.
Ny coil dia ahitàna adiresy vy tsy manara-penitra 7 * 7 mahery hanomezana tanjaka matanjaka sy fiarovana azo antoka.
Mety amin'ny fiasana eny amin'ny haavo miaraka amin'ny fitaovana mavesatra amin'ny tanana, hisorohana ny fahasimban'ny fitaovana na ny fanontanina ataon'ny tena.
Ny fonosana PU matevina fanampiny amin'ny lanyard coil 2.5kg dia manakana ny fikorontanana, mahatohitra ny sisin'ny hafanana sy maranitra.
Mifanaraka amin'ny scaffold scaffold toy ny mahazatra.
Mety amin'ny fehikibo, holsters, paosy ary harnesses.
Stainless Steel Wire Cable manokana ho an'ny Coil Lanyard:
FIRAFITRA Diameter (mm) Fanapahan-kery (KG)
1. Manana marika manokana ve ianao?
Eny, manana marika ofisialy izahay, SpocketGuard.
2. Azontsika atao ve ny manamboatra ny volavolantsika?
Azo antoka. Tongasoa eto amintsika ny OEM / ODM, ho an'ny lanyard coil, sary namboarina, habe, loko, kojakoja ary fonosana no misy rehetra.
3. Afaka mahazo santionany maimaimpoana ve isika amin'ny fizahana kalitao?
Azo antoka, tsy misy olana. Toy ny mahazatra, raha santionany amin'ny tahiry dia manolotra santionany maimaimpoana izahay amin'ny 1-3 andro. Raha mila santionany vaovao ianao dia hangataka fiampangana kely ao anatin'ny 5-7 andro. Ary ny famoahana ny fandefasana santionany dia tokony ho ny vidin'ny mpanjifa.
4. Inona ny ora fanaterana ny baiko OEM?
Miankina amin'ny habetsahan'ny baikonao izany, matetika 3-20 andro aorian'ny fankatoavana ny santionany, 7-15 andro aorian'ny nahatongavan'ny fandoavana.
5. Inona no atao hoe fandoavam-bola?
Manaiky T / T, Western Union ary Paypaly paymnet izahay noho ny baiko kely.
6. Inona no fomba fitateranao mahazatra?
Matetika amin'ny alàlan'ny Express toy ny DHL, FedEx, UPS na TNT, amin'ny rivotra na an-dranomasina no nanapahana hevitra arakaraka ny filaminana.
Serive an'ny mpanjifa an'ny Spocket:
Valiny haingana ao anatin'ny 24 ora raha misy fitakiana sy fanontaniana
Ekipa mpivarotra matihanina maherin'ny 15 taona, manampy amin'ny famahana ny fangatahanao rehetra
Ny fifehezana kalitao avo lenta dia mahazo laza tsara lavitra kokoa amin'ny tsenanao
Ny vidin'ny orinasa China tsara miaraka amin'ny sarany fandefasana entana ho fandinihana ankapobeny
Izahay dia manome ny mpanjifanay fittings namboarina manokana sy ny terminal araka ny famaritana azy ireo
Vonona izahay ary afaka mandeha amin'ny kilaometatra fanampiny mihoatra ny nandrasan'ny mpanjifanay.
Manaraka: Stretchable Transparent Heavy Duty Plastika lohataona Fitaovana fiarovana avo Lanyard Cord
Stretchable mangarahara adidy mavesatra plastika Spri ...
Fitaovana miharo fanodinana lamaody miloko jono Lanyard Pliers ...
Fitaovana vita amin'ny bungee vita amin'ny plastika Lanyard manao ...
Nylon Core dia azo antoka azo antoka Lanyard Sto ...
Fitaovana vy fiarovana lohataona Lanyard famoahana haingana ...